Rivo Rakotovao : “Fomba maneran-tany ny fihaonana amin’ny olom-boafidy” -
AccueilSongandinaRivo Rakotovao : “Fomba maneran-tany ny fihaonana amin’ny olom-boafidy”
Niteraka resa-be ny fihaonan’ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier amin’ireo depiote teny amin’ny Hotel Le Paon d’Or, Ivato.
Araka izany, nitondra fanazavana ny filohan’ny antenimieran-doholona, Rivo Rakotovao, fa fomba fanao maneran-tany izany fihaonan’ny lehiben’ny governemanta amin’ireo olom-boafidy. “Ny fihaonana tahaka ireny ve izany dia midika fa fanaovana kolikoly? Tsy marina velively izany satria misy hatrany ivelany izany fifanankalozana eo amin’ny praiminisitra sy ny olom-boafidy izany”, hoy ny filohan’ny antenimieran-doholona.
Nambaran’ity farany hatrany fa tokony hijerena ny tombontsoa ambonin’ny firenena hatrany no katsahin’ireo mpanao politika fa tsy ny tombontsoa manokana. “Tsy ilain’ny firenena intsony ny fanakorontanana amin’ny endriny maro samihafa. Ny ilain’ny vahoaka izao dia ny fandrosoana sy fampandrosoana. Izay ihany no katsahin’ny fitondram-panjakana mandrakariva. Noho izany, aoka izay ny famahanan-dalitra ny mpiara-belona amin’ny tena”, hoy i Rivo Rakotovao.
Ankoatra izay, nohamafisin’ity laharana voalohan’ny lapan’Anosikely ity fa tsy handefitra amina fanakorontanana ny fanjakana satria efa manomboka miarin-doha ny firenena, ary maro ny zava-bita sy ny mbola hotanterahina indrindra fa ny fizorana mankany amin’ny fifidianana madio sy ao anatin’ny fitoniana tanteraka. Nomarihiny fa dingana lehibe ny vitan’ny fitondram-panjakana tamin’ny namerenana ny firenena ao anatin’ny fianakaviambe iraisam-pirenena sy ny fiverenan’i Madagasikara amin’ny rafitra ara-dalàna, ka nahazoana fankatoavana. Tsy vitan’izay, hoy izy, fa manomboka mihazakazaka miara-miasa amin’i Madagasikara ireo firenen-dehibe, indrindra ny eo amin’ny lafin’ny fampandrosoana ara-toekarena.
Etsy andaniny, nanambara ny filohan’ny Antenimieram-doholona fa ilaina ny fifanomezan-tanan’ny rehetra ho fampandrosoana ny firenena.